युगसम्बाद साप्ताहिक - कूटनीतिक क्षमता भए नेपाली विमान युरोप उड्थे
नेपालको कूटनीतिक कमजोरीले गर्दा युरोपेली यूनियनले नेपाली वायुसेवामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हट्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ) प्रतिवेदनमाा नेपालभन्दा कमजोर नतिजा आएको भारत कालोसूचीमा नपर्नुको कारण उसको कूटनीतिक क्षमता हो भने नेपालले कुटनीतिक क्षमता देखाउन नसक्दा आईकाओले कालोसूचीबाट हटाइसक्दा पनि युरोपेली यूनियनबाट हट्न सकेको छैन ।
आजभन्दा पाँच वर्षअघि युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली विमानहरूलाई उसको आकाशमा उड्न नपाउने गरी राखेको कालोसूचीबाट मुक्ति पाउन नसक्नुमा नेपालको कूटनीतिक असफलता प्रमुख कारक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले युरोपेली बजारसम्म हवाई पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याए पनि यी विमानहरु बजारको अभावमा सीमित उडान भर्दैआएका छन् र चरम घाटा व्यहोरिरहेको छ ।
अर्कोतिर सरकारले उड्ड्यन सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तर मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रवृतिका कारण पनि ईयूले उक्त सूचीबाट नेपाललाई नहटाएको बताइन्छ । प्राविधिक रुपमा आईकाओले नेपालले हवाई क्षेत्रमा सुधार गरेको भन्दै कालोसूचीबाट हटाइसकेको छ । तर, हवाई दुर्घटना बढेको, आइकाओको मापदण्ड पालना नभएको, नियामक निकाय नै सेवाग्राही समेत रहेको भन्दै ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको पाँच वर्ष पुगेको छ ।
ईयूको त्यही निर्णयका कारण नेपाल वायु सेवा निगमले हालै खरिद गरेका दुइवटा ठूला आकारका जहाज समेत युरोपमा उडाउन सकेको छैन । नेपालले कतिपय कुरामा सुधार गरे पनि ईयूले एकपछि अर्को कारण देखाउँदै उक्त सूचीबाट हटाएको छैन । यसमा कूटनीतिक क्षमताको कमजोर प्रदर्शनले भूमिका खेलेको छ ।
अर्कोतिर नेपाल विश्वका थुप्रै वायुसेवाा कम्पनीहरुका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । नेपालमा हरेक दिन सबैभन्दा पहिले धेरै अवतरण हुने विमान युरोपबाटै आउँछ । अनि विश्वका धनी र प्रभावशाली मुलुकका विमानहरु पनि नेपाल आउँछन् । उनीहरुले एकलौटी व्यापार गरिरहेको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दूरी उडान गर्नासाथ उनीहरुको व्यापार खस्कने हुँदा पनि प्रभाव र दवावका साथ राजनीतिक–कूटनीतिक पक्षले काम गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
होइन भने धेरैखाले सुधारपछि पनि कालोसूचीबाट हट्न नसक्नुको कारण के हो त ? नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मान्धरका अनुसार “सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपालभन्दा भारतको आइकाओ अडिट रिजल्ट कम छ । तर भारत किन ईयूको कालोसूचीमा छैन, नेपाल मात्र किन ? किनकी नेपाल सानो देश, गरिब देश भनेर हेप्नसक्ने भएकाले हो ।”
यसका लागि उड्डयन सुरक्षामा सुधारका साथै सरकारको दरिलो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
अर्कोतिर युरोप र अमेरिकाले हालसम्म उडान अनुमति नदिएका चिनियाँ जहाजलाई नेपालले अनुमति दिएको कुरासँग पनि ईयूको उक्त निर्णयलाई जोडेर हेर्ने गर्छन् । हाल नेपाल वायु सेवा निगमले केही चिनियाँ जहाज उडाइरहेको छ । अमेरिकाको बोइङ र युरोपको एयरबसकै हाराहारीमा चीनले विमान निर्माण गरिरहेको छ । यसबाट उनीहरुको बजार घट्न थालेको छ ।
इयूले कालोसूचीबाट हटाउन एउटा गम्भीर शर्त अघि सारेको छ । ईयू अरू कुरामा सकारात्मक देखिए पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र निमयन गर्ने जिम्मेवारी एउटै निकायले लिन नहुने शर्त उनीहरुको छ । हालै मात्र पनि ईयूले प्राधिकरणको नियमन र सेवाको कामलाई छुट्ट्याएर अलगअलग संस्था बनाउनुपर्ने बताउँदै पत्र पठाएको बताइन्छ ।
हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्ने र उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने दुबै काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले त्यसलाई अलगअलत निकायको जिम्मेवारीमा दिने कानुन संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गराउन पहल भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–“मन्त्रिपरिषद्ले ऐनलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ र प्रधिकरणलाई टुक्रयाउने सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ । यो ऐन संसद्को आउँदो अधिवेशनबाटै पास गराउन मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।” तर, यतिले मात्रै कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना भने नरहेको कतिपयको ठम्याई छ ।